Booliska San Diego oo Amray in la soo Qabto Nin ku Eedeysan Dilka Xaaskiisa – XOGMAAL.COM
Booliska San Diego oo Amray in la soo Qabto Nin ku Eedeysan Dilka Xaaskiisa
By Muriidi Baba	 Last updated Mar 8, 2019
Booliska magaalada San Deigo ee gobolka California ayaa amrey in la soo xiro Cabdicasiis Keerow oo lagu tuhunsan yahay in uu diley xaaskiisa, Muna Salaad Kuri oo loo yaqaaney Tootoo. Cabdicasiis oo marki hore ay boolisku daneynayeen in ay wareystaan ayaa hada macluumaad cusub oo ay heleen danbi-baarayaasha waxaa uu noqdey eedeysanaha dilka marxuumada.
Tootoo ayaa laga helay gurigeeda oo ku yaalo magaalada City Heights ee California ka dib marki maalmo la la’aa. Qoyska ay ka dhalatey oo shirkadi guriga ka daganeyd ay u fureen si looga wardoona Muna ayaa meydkeeda oo dhaawacyo madaxa ku leh, dhiig badana uu ku yaal ka helay sariirta qolka jiifka marxuumada.
Tan iyo marki la helay maydka maalinimadi Sabtidi, waxa ay booliska San Deigo raadinayeen ninka ay marxuumadu udhaxdey oo ahaa qofka ugu horeeyo ee in wax laga weydiiyo ay mudneyd. Balse wali lama hayo meel uu jaan iyo cirib dhigey. Hadana waxa ay boolisku jareen warqadi lagu soo qaban lahaa.
Hadii aad arragto Cabdicasiis Kerow ama aad meel ku ogtahay fadlan la xariir booliska kuugu dhow, hana iskudayin aan kala hadasho danbigan iyo in isaga lagu raad joogo midna.
Mareykanka: Nin Bistoolad ku qabtay dhalinyaro Soomaali ah oo xabsi iyo tijaabo adag wajahaya